स्थानीय निर्वाचन विशेष : धनगडी उपमहानगरमा मेयरका सम्भावित उम्मेद्‌वार को-को छन् ? « Etajakhabar
स्थानीय निर्वाचन विशेष : धनगडी उपमहानगरमा मेयरका सम्भावित उम्मेद्‌वार को-को छन् ?
मोहन जोशी/ धनगढी :
आउँदाे ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनकाे मिति घोषणा गरेसँगै चुनावी सरगर्मी बढेको छ । निर्वाचन आउन दुई महिना बाँकी हुँदा गाउँदेखि सहरसम्म चुनावी माहोल तात्न थालेको छ । ‘आगामी निर्वाचनमा कुन पार्टीबाट को उम्मेदवार बन्ने, कस्तालाई भोट दिने ?’ लगायत यावत् सवालमा अहिले जताततै चर्चा परिचर्चा छ । त्यसमाथि सुदूरपश्चिमको एक मात्र उपमहानगरपालिका रहेको धनगढीलाई अझ विषेश रुपमा हेरिन थालिएको छ । खास गरी कुन पार्टीले कस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउलान् भन्ने कौतुहलता आमरुपमा देखिन्छ ।
स्थानीय चुनावका लागि धनगढीमा दलहरूले उम्मेदवार छान्न सुरु नगरे पनि सम्भावित उम्मेदवारको चर्चा भने भइरहेको छ । खास गरी प्रमख राजनीतिक दल नेकपा एमाले, नोपली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले कसलाई टिकट दिने भन्ने सवालमा अहिले चर्चा हुन थालेको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरका लागि उद्योगि, व्यवसायी गोपाल हमालले स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा नै गरिसकेका छन् । अघिललो निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र रूपमा मेयर पदमा पराजित भएका हमालले यस पटक पुनः स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन उनले विवेकशील साझा पार्टीको सुदूरपश्चिम संयोजक पदबाट राजीनामा समेत दिएका छन् । अहिल्लो निर्वाचनमा हमाल नृपबहादुर वडसँग दुई हजार ७०० मत अन्तरले पराजित भएका थिए ।
एमालेबाट मेयरका अर्का सम्भावित उम्मेदवार रण्बहादुर चन्द लामो समयदेखि राजनीतिमा सक्रिय भए पनि हालसम्म आम निर्वाचनमा उनले चुनाव लडेका छैनन् । एमाले कैलाली जिल्ला सचिवमा रहेर लामो समय काम गरिसकेका चन्दले राम्रो पकड बनाएका छन् । खास गरी उनलाई इमान्दार राजनीति कर्मीका रूपमा सबैले चिन्ने गरेका छन् । उनै चन्द यसपटक भने धनगढीको मेयरका लागि टिकट पाउन दौडधुप गरिरहेका छन् । पार्टीमा लामो समय सम्म योगदान दिए पनि कुनै अवसर नपाएका कारण यस पटक उनको सम्भावना बलियो देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसबाट मेयर पदका लागि वर्तमान मेयर नृपबहादुर वड, उपमेयर सुशीला मिश्र भट्ट र नेता कृष्णबहादुर महराको चर्चा हुन थालेको छ ।
२०७४ को निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमाललाई दुई हजार ७०० मतले पराजित गर्दै नृपबहादुर वड मेयरमा विजयी भएका थिए । उनले अझै एक कार्यकाल दोहोरिन पाउनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमै घाेषणासमेत गर्न थालेका छन् । आफूले नगरको विकासका लागि स्पष्ट खाका बनाएको र सो अनुसार काम गरेर देखाउनका लागि आफू पुनः मेयरमा उम्मेदवार हुन पाउने पर्ने उनको जिकिर छ ।
यसैगरी धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर सुशीला मिश्र भट्टको नाम पनि यस पटक मेयरको उम्मेदवारका रुपमा चर्चामा आएको छ । अर्को चुनावमा उपमेयर पदमै नदोहोरिने घोषणा गरिसकेकी उमपेयर भट्टले मेयरको टिकका लागि पार्टीमा लविङ सुरु गरेको बताइन्छ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय प्रशिक्षकका रुपमा समेत काम गरिसकेकी भट्टको केन्द्रमा राम्रो पहुँच भएका कारण उनले टिकट पाउन सक्ने आंकलनसमेत गरिन थालेको छ । उनी कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट सो पार्टीका धनगढी नगर अध्यक्ष मदन रेग्मीको नाम चर्चामा आउन थालेको छ । लामो समय नेकपा एमालेमा राजनीति गरेका रेग्मी सामाजिक क्षेत्रमा परिचित व्यक्ति हुन् । उनी नेकपा एमाले निकट युवा संघको केन्द्रीय सचिव समेत भएका थिए । अहिले उनी नेकपा एसको नगर अध्यक्ष छन् । यसका अलावा सो पार्टीबाट नै मेयरमा चुनाव लड्ने भन्दै व्यवसायी राजेश भण्डारीको नाम समेत चर्चामा छ । तर, भण्डारी अहिलेसम्म नेकपा एसमा खुलेर लागेका छैनन् । उनी यसअघि नेकपा एमालेमा आवद्ध थिए ।